सर्वाधिक गोलकर्तालाई दिइने गोल्डेन बुट कसले पाउला ? - सर्वाधिक गोलकर्तालाई दिइने गोल्डेन बुट कसले पाउला ?
सर्वाधिक गोलकर्तालाई दिइने गोल्डेन बुट कसले पाउला ?
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ३१ असार, 06:40:00 AM
विश्वकपको २०१८ को ट्रफीको चर्चासंगै सर्वाधिक गोलकर्तालाई दिइने गोल्डेन बुट कसले पाउने भनेर आम दर्शक तथा खेलाडीको पनि चर्चाको विषय हुन्छ । यस वर्षको विश्वकपमा गोल्डेन बुट कसले पाउने सम्भावना छ त ?
चौथो स्थानमा रहेर विश्वकप अन्त्य गरे पनि इंग्ल्याण्डका कप्तान तथा मुख्य स्ट्राइकर ह्यारी केनका लागि भने सुखद खबर छ । गोल्डेन बुट पुरस्कार उनले पाउने निश्चित जस्तै भएको छ ।
केनले विश्वकपका सात खेलमा ६ गोल गरेका छन्, जसमा एउटा ह्याट्रिक र तीन पेनाल्टी सामेल छ । उनले समूह चरणको खेलमा ट्युनिसियाविरुद्ध २ गोल गरेका थिए भने पानामाविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । त्यस्तै उनले अन्तिम १६ को खेलमा कोलम्बियाविरुद्ध १ गोल गरेका थिए ।
४ गोलसहित उनलाई पछ्याइरहेका रोमेलु लुकाकुले छन् । फ्रान्स र क्रोएसियाका कुनै पनि खेलाडीले ३ भन्दा बढी गोल गरेका छैनन् । केनलाई भेट्टाउनका लागि फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पेलाई अवसर छ । उनले विश्वकपमा अहिलेसम्म ३ गोल गरेका छन् । फाइनलमा उनले ह्याट्रिक गरे भने केनलाई भेट्नेछन् ।
२०७५, ३१ असार, 06:40:00 AM